Itromsø: Haweenay soomaali ah oo loo maxkamadeynayo shahaadooyin jaamacadeed oo been abuur ah. - NorSom News
Itromsø: Haweenay soomaali ah oo loo maxkamadeynayo shahaadooyin jaamacadeed oo been abuur ah.
Sida uu qoray wargeyska Itromsø ee magaalada Tromsø, haweenay 28-sano jir ayaa lasoo taagi doonaa maxkamada Tromsø, iyada oo ku eedeysan adeegsiga shahaadooyin jaamacadeed oo been abuur ah.
Haweeneydan ayaa xili ay codsaneysay in loo aqoonsado(ansixiyo) aqoonteeda waxbarasho jaamaceed ee sare, keensatay shahaado Bachelor(1-aad) oo machadka Simad ee Soomaaliya ah, iyo Shahaado Master (2-aad) oo ay ka wadatay jaamacada Kenyatta university ee dalka Kenya.
Labadadaba shahaado jaamaceed ayaa sida uu wargeyska Itromsø qoray markii danbe la ogaaday inay ahaayeen kuwo been abuur ah.
Booliska ayaa haweeneydan kusoo oogay kiis dacwadeed, waxaana haweeneydan dhawaan lasoo taagi doonaa maxkamad woqooyiga Tromsø ee dalkan Norway.
Xigasho/kilde: Skal ha forfalsket dokument fra høyere utdanning.
Previous articleMaqaal-AbdiQaybdiid Muuse: Mushkilada masaajidka T.I.S iyo sida lo xalin karo.
Next articleNorway: Dadka uu xanuunka Covid-19 ku dhacay oo isku dar 10.000 gaartay.